CIBRO - QAADASHO
FIRCOON IYO AFADIISII
W.Q. Cabdulfataax Maxamed Cabdulle
Xaaskii Fircoon Tumay ahayd?
Xaaskii Fircoon waxa magaceeda la oran jiray Aasiya Binti-Muzaaxim waxayna ahayd haweeney aad u qiimo iyo sharaf badan. Waxay ka mid tahay saddexda haween ee ugu kaamilsan dumarka (labada kale waxay kala yihiin: Maryama oo ahayd hooyadii Nabi Ciise (S.C.W.), iyo Khadiija oo ahayd afadii Nabi Muxammad (S.C.W.)).
Xadiis ku sugan saxiixaynka oo laga soo wariyey Abii-Muusaa Al-Ashcari, Nabigu (S.C.W.) wuxuu yiri: “waxaa kaamil noqday Ragga wax badan, haweense waxaa ka kaamil noqday Aasiyadii Fircoon, Maryama Bintu Cimraan, iyo Khadiija Binti-Khuweylid, fadliga Caa’isha ee haweenkana waa sida thariidka iyo cunnada kale”. (W.Wariyay Bukhaari iyo Muslim).
 Ereyga thariid waxa lagu micneeyaa muufo iyo maraq laysku burburiyay, waxaana la sheegaa in ay aad u macaantahay calooshana u roontahay. Carabtuna aad bay u jecelyihiin oo waxay ka door bidaan cuntooyinka kale.
Xadiis kale oo Ibnu Cabbaas (R.C.) laga soo wariyey ayaa isna wuxuu yiri: “Rasuulka Alle (S.C.W.) ayaa afar xarriiqimood dhulka ku sameeyay, markaas buu yiri: ‘Ma garaneysaan waxa ay yihiin? Waxay yiraahdeen ‘Alle iyo Rasuulkiisa ayaa naga og’. Wuxuu yiri: ‘Haweenka Jannada waxaa u fadli badan Khadiija Binti Khuweylid, Faatuma Binti-Muxammad, Maryama oo ah gabadhii uu dhalay Cimraan (ahna hooyadii Nabi Ciise (S.C.W.), iyo Aasiya Binti-Muzaaxim oo ah afadii Fircoon”. (W.Wariyey Axmed).
Aayada Quraanka ee qoraalkani xambaarsan yahay si aad mid kasta si toos ah u dhegeysatid GUJI HALKAN, kaddib shaashada soo bixi doonta ka dooro suurada iyo aayada aad rabtid in aad dhegaysatid, adigoo xulanaya Shiikh Al-Xudayfi ama Al-Xusari... GUJI HALKAN
Markaad u fiirsato dabeecadda iyo naxariista uu Alle (S.W.) qalbiga Aasiya ku abuuray waxaad dareemeysaa in ay tahay hooyadii dhib la’aanta dhashay Nabi Muuse (S.C.W.). Bal u fiirso aayaddan soo socota oo ka hadleysa Aasiya oo la hadleysa Fircoon markii ay heshay santuukhii uu ku jiray Nabi Muuse oo Alle hooyaddiis faray in ay badda ku tuurto.
“Xaaskii Fircoon waxay tiri: ‘Waa il-qabowsigeenna (farxaddeenna) aniga iyo adigaba. Ha dilin, waa intaas oo uu na anfacaaye ama aan ka dhigannaa wiil.’ mana dareensanayn (ciribta arrintaas)”. Suuradda Al-Qasas: aayadda 9.
Sida aayaddu caddeysay, Fircoon ma dhalin wiil laakiin wuxuu lahaa gabar keliya. Ilaahey (S.W.) oo nooga warramaya suubbanaantii Aasiya, Alle-ka-cabsigeedii iyo guud ahaan qiimaheedaba, wuxuu aayaddan ku yiri:
“Alle (S.W.) wuxuu mataal (tusaale) uga dhigay kuwa xaqa rumeysan afadii Fircoon, (Aasiya); markii ay tiri: “Rabbiyow iiga dhis agtaada (la jirkaaga), guri jannada gudaheeda ah, oo iga samata bixi Fircoon iyo camalkiisa, oo iga samata bixi qoomka dulmi-falayaasha ah”. Suuradda Al-Taxriim, aayadda 11.
Halkaas waxaan ka ogaaneynaa in ruuxii wanaagsan aysan waxba u dhimeynin xumaanta qof kale haddii uusan ka raalli ahayn, ama ku raacsanayn xumaantaas. Laakiin haddii uu ku taageero oo uu raalli ka yahay xumaanta qof kale uu sameynayo, wuxuu noqonayaa mid la mid ah. Sidoo kale, ruuxii xumaan sameeya wax uma tarto la noolida uu la noolyahay dad fiican haddii uusan wax ka qaadaneynin sida afadii iyo wiilkii Nabi Nuux (S.C.W.) iyo Afadii Nabi Luud (S.C.W.) iyo wixii la mid ahaa.
Waxaad arkeysaa in afadii Fircoon aysan seygeedii ku raacin xadgudubyadii uu sameeyay, sidaas darteedna ay u noqotay haweeney aad u qiimo badan. Qoomkii Fircoon ee amarkiisa qaatay waxay noqdeen kuwo isaga lala halaagay.
“…waxay raaceen amarkii Fircoon, amarka Fircoonna ma ahayn hanuun toosan”. Suuradda Huud, aayadda 97.
Fircoon Nin Caynkee ah Buu ahaa?
Meydkii Fircoon: Eeg Sawirka oo Weyn
Fircoon wuxuu ahaa nin diiday oo ka madax-adaygay aayadaha iyo xujooyinka Alle (S.W.) uu lasoo diray Nabi Muuse (S.C.W.). waa ninka ilaahnimada sheegtay isagoo aadane ah. wuxuuna kusii socday kibirkiisii iyo isla-weynaantiisii ilaa uu indhaha ku dhuftay ciqaabtii Alle oo isaga iyo intii raacsanaydba badda lagu qarqiyay. Alle (S.W.) oo noo sheegaya dembiyadii waaweynaa ee Fircoon uu galay, wuxuu yiri:
“Xaqiiqdii, Fircoon waa kibray oo dhulka ayuu isku sareysiiyay, oo ka dhigay dadkeedii qolooyin, isagoo daciifinaya (cadaadinaya) qolo (waa reer Banii Israa’iile) dhexdood iyaga, oo dilaya wiilashooda, haweenkoodana nolol ku deynaya; wuxuu ahaa mid kamid ah fasahaad-falayaasha”. Suuradda Al-Qasas, aayadda 4.
“(Fircoon) waa beeniyay, oo caasiyoobay”. “Dabadeed dhabarka ayuu jeediyay isagoo sii soconaya”. “Dabadeed wuxuu soo kulmiyay dadkiisii oo kor ugu dhawaaqay”. “Wuxuuna yiri: ‘waa aniga rabbigiinna korreeya!”. “Sidaa darteed, Ilaahey baa u qabtay xadgudubkiisii dambe iyo kii horeba”. Suuradda Al-Naazicaat, aayadaha 21 – 25.
Xadgudubka hore ee Alle (S.W.) noo sheegayo waa markii hore ee uu ilaahnimada sheegtay. Eeg suuradda Al-Qasas, aayadda 38-aad: “Maa calimtu lakum-min ilaahin Qeyrii – Anigu idiin ma ogi inaad leedihiin ilaah kale aan ahayn aniga!”. Xadgudubka dambana waa markan labaad ee uu ilaahnimada sheegtay. Al-Naazicaat, aayadda 24aad: “Anaa rabbukum al-aclaa - waa aniga rabbigiinna korreeya!”. Labada xadgudub ee uu Ilaahnimada ku sheegtay waxaa u dhaxaysay 40 sannadood.
Ilaahey (S.W.) oo nooga warramay dabeecaddihii Fircoon iyo qoomkiisii, iyo ciqaabtii ay muteysteen wuxuu noo sheegay:
“Dabadeedna iyagii kaddib waxaan ula dirnay (Nabi) Muuse aayadahayagii Fircoon iyo Duqeydiisii, laakiinse waa dulmiyeen (diideen); ee fiiri sida ay ahayd ciribtii mufsidiinta (fasahaad falayaasha)”. Suuradda Al-Acraaf, aayadda 103.
“Sidii caadadii iyo dhaqankii reer Fircoon iyo kuwii ka horreeyeyba, waxay ku gaaloobeen aayadihii Alle (S.W.), markaasuu Alle (S.W.) u ciqaabay dambiyadoodii; xaqiiqdii Alle (S.W.) waa Xoog Badane, ciqaab adag”. Suuradda Al-Anfaal, aayadda 52.
“Sidii caadadii iyo dhaqankii reer Fircoon oo kale iyo kuwii ka horreeyeyba, waxay beeniyeen aayadihii Rabbigood, markaas baan ku halaagnay dambiyadoodii awgood, waana hafinnay (qarqinnay) qoomkii Fircoon, maxaa yeelay kulligoodba waxay ahaayeen dulmi-falayaal”. Suuradda Al-Anfaal, aayadda 54.
“Dabadeedna iyagii kaddib waxaan ula soo dirnay Muuse iyo Haaruun xagga Fircoon iyo duqeydiisii aayadahayagii; laakiinse waxay u dhaqmeen si isla-weyni iyo kibir ah oo ahaayeen mujrimiin (dembiilayaal)”. Suuradda Yuunus, aayadda 75.
Fircoon si uu uga hortago aayadaha Alle (S.W.) wuxuu adeegsaday sixirroolayaal u adeegi jiray. Wuxuuna u sheegay, haddii ay sixir uga adkaadaan Nabi Muuse, in uu siin doono abaalgud. Alle (S.W.) oo arrintaas nooga warramayana wuxuu yiri:
“Markaas bay falan-fallowyadii (sixiroolayaashii) u yimaadeen Fircoon; waxay yiraahdeen: ‘Dhabtii waxaa jiri doona abaalgud (wanaagsan) oo aan leenahay innaga haddii aan nahay adkaadayaasha”. Suuradda Al-Acraaf, aayadda 113.
Aayadda xigta oo qisada sii wadda ayaa jawaabtii uu Fircoon siiyay sixiroolayaasha soo gudbineysa.
“Wuxuu yiri: ‘Haah, waxaa intaa dheer, waxaad kamid noqon doontaan (haddii aad adkaataan) kuwa iigu dhaw aniga”. Suuradda Al-Acraaf, aayadda 114.
Hase ahaatee, waxaa dhacday in sixiroolayaashii ay fashilmeen, iyagoo ogaaday waxa (xujooyinka) Nabi Muuse tusay in aysan ahayn sixir balse ay yihiin aayado cad-cad oo mudan in la rumeeyo; waxayna go’aansadeen in ay si bareer ah u rumeeyaan xujoojinka la tusay darteed. Fircoon oo arrintaas ka careysan isla markaasna u hanjabaya sixirroolayaashii ayaa yiri:
“…waxaad rumeyseen isaga (Nabi Muuse) ka hor aniga oo aan idiin idmin; hubaashii tani waa qoolid (dhagar) aad ku soo qoosheen magaalada (shirqool aad soo maleegteen) si aad uga saartaan dadkeeda, laakiinse waad ogaan doontaan”. Suuradda Al-Acraaf, aayadda 123.
“Hubaashii, waxaan gacmihiinna iyo lugahiinna u goyn doonaa si isdhaaf ah, dabadeedna waan idin dal-dali doonaa dhammaantiin”. Suuradda Al-Acraaf, aayadda 124.
Alle (S.W.) oo noo sheegaya wixii uu reer Banii Israa’iil ugu nicmeeyay iyo sidii uu uga nabadgeliyay Fircoon iyo colkiisiiba wuxuu kitaabkiisa ku yiri:
“Xusa markii aan idinka badbaadinnay qoomkii Fircoon oo idin dhadhansiin jiray cadaab daran, iyagoo gawrici jiray wiilashiinna, deysanayeyna haweenkiinna, waxaana taas ku jiray imtixaan weyn oo ah xagga Rabbigiin”. Suuradda Al-Baqara, aayadda 49.
“Xusa markii aan idiin jeexnay badda oo idin badbaadinnay, hafinnayna qoomkii Fircoon idinkoo fiirinaya (xagooda markii ay biyihii baddu dabooshay)”. Suuradda Al-Baqara, aayadda 50.
Alle (S.W.) waxaa kale oo uu kitaabkiisa noogu sheegay ciddii ku gaalowda oo awood iyo xeelad is-bidda, in ay la mid yihiin Fircoon iyo qoomkiisii iyo kuwii ka horreeyayba ee Eebe si daran u qabtay. Ciddii xoog is-bidda iyagoo gaalo (Alle diidayaal) ah waxa uun u dambayn doonta jab iyo halaag iyo weliba gelidda naarta Jahannamo oo usii dheer. Alle (S.W.) oo arrintaas noo caddeynaya wuxuu yiri:
“Sida dhaqankii dadkii Fircoon iyo kuwii ka horreeyayba, waxay beeniyeen Aayadahayaga markaasuu Alle (S.W.) u qabtay (baabi’iyay) dambiyadoodii dartood; Ilaaheyna waa ku daran yahay ciqaabta”. Suuradda Aala-Cimraan, aayadda 11.
Ilaahey (S.W.) oo nooga warramaya sidii uu u halaagay Fircoon iyo qoomkiisii isla markaasna noo caddeynaya tabar-darrida Fircoon, wuxuu yiri:
“Waxaan baddii ka gudbinnay ilmihii reer Banii Israa’iil, saa Fircoon iyo ciidamadiisii baa raacay aabi iyo cadaawad (ay u qabaan darteed), ilaa markii ay hafintu heshay, Fircoon wuxuu yiri: waxaan rumeeyay in aysan jirin cid xaq lagu caabudu Ilaaha xaqa ah mooyee, oo ay ilmihii reer Banii Israa’iil rumeysan yihiin; aniguna waxaan kamid ahay Muslimiinta”. Suuradda Yuunus, aayadda 90.
Ilaahey S.W. wuxuu ugu jawaabay sidan:
Isxisaabi Inta aan lagu xisaabin isxisaabin Guji..
| Quraan | Siiro | Saxaabo | Salaat | Zakaat | Halal | Hajj | isxisaabi |
“Ma hadda (ayaad rumeysay!) halka aad awal ka diiday in aad rumeyso, waxaadna ahayd mid ka mid ah mufsidiinta (fasahaad falayaasha)”. Suuradda Yuunus, aayadda 91.
“Maanta waxaan uga soo saari doonnaa jirkaaga (mootan) debedda badda si aad ugu noqoto calaamo kuwa imaanaya dabadaa! Xaqiiqdiina, in badan oo kamid ah dadka waa ka dhoohan yihiin Aayadahayaga (xujooyinka, caddeymaha, qodobbada, casharrada, calaamooyinka, waxyiga iwm.)". Suuradda Yuunus; Aayadda 92.
Markii Fircoon la halaagay oo la qarqiyay kadib, Ilaahey (S.W.) wuxuu reer Banii Israa’iil u sheegay in ay si nabad ah u degaan dhulka (Masar) oo ay qaataan si buuxdana ugu dhaqmaan diinta loo soo dejiyay.
“Waxaannuna ku niri ilmihii Israa’iil isaga (Fircoon) dabadii: ‘Dega dhulka, dabadeed, markii uu yabooha dambe ee kama dambaysta ah soo dhowaado (waa maalinta Qiyaame ama marka Nabi Ciise (S.C.W) uu dhulka usoo degayo) waan idin keeni doonnaa dhammaantiin idinka oo kulansan”. Suuradda Al-Israa, aayadda 104. [eeg tafsiirka Al-Qurdubi, mujallada 10, bogga 338-aad].
Gebagebadii, mucjisooyinka waaweyn ee Ilaahey (S.W.) waxaa ka mid ah in meydkii Fircoon oo ah ninkii ilaahnimada sheegtay uu maanta weli ifka yaal isaga oo aan go'go'in, sababta sidaas looga dhigayna waxay tahay, sida Alle (S.W.) noo sheegay, in lagu cibra qaato oo lagu waantoobo. Ilaahey hanaga dhigo kuwii hanuunsama oo waano qaata, diintana sida ay tahay ugu dhaqma. [Aamiin].
F.G.: Quraanka Ilaahey af-Carabi ayuu kusoo degay. Sidaas darteed aayadaha aan soo xiganayo waa micnaha aayadaha Qur’aanka oo af-soomaali ah. Wixii khaladaad ah ee idiin muuqda waxaan codsanayaa in laygu baraarujiyo. [Halkan ka daalaco Quraanka]
Cabdulfataax Maxamed Cabdulle
Faafin: SomaliTalk.com | March 17, 2004
.Yaa Sameeyay Diyaarad Matoor leh tii ugu horeysay?